ယူနိုက်တက်မှာ အသစ်တစ်ဖန်ပြန်မွေးလာတဲ့ သရဲနီတပ်သား ၄ယောက်ရှိကြောင်း ဆိုလ်းရှားပြော – FBV SPORT NEWS
May 2, 2021 By admin Sports News
အစဉ်အလာအရ ခါးသီးပြိုင်ဘက်တွေဖြစ်တဲ့ ကလော့ရဲ့ကြိုးကြာ လီဗာပူးနဲ့ ဆိုလ်းရှားရဲ့ သရဲနီ ယူနိုက်တက် တို့ ပရီးမီးယားလိဂ်ပွဲကန်ရတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။
ရိုးမားကို အငြိုးထားသလားအောင်မေ့ရအောင် ဆိုလ်းရှားရဲ့ ယူနိုက်တက်က ဂိုးမိုးရွာပြီးတဲ့နောက်မှာ ယူနိုက်တက်အတွက် အသစ်တစ်ဖန်ပြန်လည်မွေးဖွားလာတဲ့ ကစားသမား ၄ဦးအကြောင်းဆိုပြီး Express Sports ကဖော်ပြထားပါတယ်။
သူတိုတွေကို ကြိုးကြာနဲ့ပွဲမှာထုတ်သုံးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဆိုတော့ သူတို့တွေက ဘယ်သူတွေလဲဆိုတာကို မန်ဖန်တွေသိအောင် ပြန်လည်ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။
အားလုံးသိတဲ့အတိုင်းယူနိုက်တက် ကြယ်ပွင့် လုရှောကကောင်းတယ်ဆိုသလိုပဲ ဘီဆာကာကလည်း ခုနောက်ပိုင်းမှာတော်တော်လေးကောင်းနေပါတယ်။သူ့ကို ဥရောပချန်ပီယံရှစ်အတွက် ဆောက်ဂိတ်ကစဉ်းစားနေပါတယ်။ရိုးမားနဲ့ပွဲမှာလည်း သူဟာတော်တော်လေးတိုးတက်ကောင်းမွန်ခဲ့ပါတယ်။
ပေါ့ဘာဟာ စိတ်ပျက်စရာကောင်းတွေနေ့တွေကို ရင်ဆိုင်ခဲရပါတယ်. ဝေဖန်မှုတွေ အပြစ်တင်သံတွေ ဖိအားတွေပေါ့. ဒါပေမယ့် နောက်ပိုင်းမှာ ပေါ့ဘာဟာ ပျော်ရွင်လာတယ်။ ကခုန်လာတယ်။ ကွင်းထဲမှာ သူ့အရည်အချင်းတွေကို ထုတ်ပြလာနိုင်တယ်။အရင်ထက်ပေါ့။
ပင်သစ်ကွင်းလယ်ကစားသမား ပေါ့ဘာဟာ စပါးနဲ့ရိုးမားကိုနိုင်ခဲ့တဲ့ပွဲတွေမှာ အကောင်းဆုံးခြေစွမ်းပြခဲ့တယ်။ ပေါ့ဘာဟာ ယူနိုက်တက်နဲ့အတူ ပြန်လည်ရှင်သန်လာပြီလို့ဆိုလ်းရှားကပြောခဲ့ပါတယ်။သူကို စာချုပ်အသစ် ချုပ်ဆိုဖို့လုပ်နေကြပါပြီ
ဒီရာသီဟာ ဂရင်းဝုဒ်အတွက်ခက်ခဲခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမယ့်သူဟာ ပြီးခဲ့တဲ့ ကစားပွဲ ၈ပွဲမှာ ၅ဂိုးထိသွင်းယူထားပြီး ဆိုလ်းရှားရဲ့ Squadထဲက ပြန်လည်မွေးလာတဲ့ ကစားသမားတစ်ယောက်ဖြစ်လာပါတယ်။ နော်ဝေးကစားသမားရဲ့ စွမ်းရည်ကို ရိုးမားနဲ့ပွဲမှာလည်းသူဟာ ပြသခဲ့ပြီး သူဟာ ကြိုးကြာနဲ့ပွဲမှာ ပါဝင်ဖို့ အသင့်ရှိနေပါတယ်၊
တကယ်လို့သာ ကာဗာနီကို ဆုံးရှုံးခဲ့ရမယ်ဆို ယူနိုက်တက်အတွက် ဝမ်းနည်းစရာဖြစ်ရပ်ပဲလို့ဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်။ သူဟာအိုးထရက်ဖိုစ့်အတွက် တစ်ခုတည်းသောမျော်လင့်ချက်လည်းဖြစ်ပါတယ်။
နေရာလွတ်ရှာဖွေတာမှာဆရာကျပြီး ဂိုးသွင်းထက်မြက်တဲ့ အထောင်တိုက်စစ်မှူးစစ်စစ်တစ်ယောက်ဆိုတာ သူဟာ ယူနိုက်တက်မှာ လာသက်သေပြနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။
ပြီးခဲ့တဲ့ ၅ပွဲမှာ ၅ဂိုးထိသွင်းယူထားပြီးတော့ ဂိုးဖန်တီးမှုတွေလည်း ပြုလုပ်ထားပါတယ်.အသက် ၃၄နှစ်ရှိပြီဖြစ်ပေမယ့် ဂရိတ်နတ်ဘုရားလို စွမ်းအားပြည့်တဲ့ ကာဗာနီဟာ ကြိုးကြာကို အ‌ကောင်လိုက် ကင်စားပွဲမှာ ပွဲထွက်ခွင့်ရချင်နေပါတယ်။ ကာဗာနီဟာ ဘောလုံးသမားတစ်ယောက်ရဲ့ နေဝင်ချိန်မှာမှ ပြန်လည်မွေးဖွားလာတဲ့ ယူနိုက်တက်အတွက်မျှော်လင့်ချက်ပဲဖြစ်ပါတော့တယ်။
ထိပ်တန်းတိုက်စစ်မှူး ၂ယောက်ကို ထုတ်ရောင်းရင် မှားလိမ့်မယ်လို့ ဆိုလ်းရှားကို မော်ဂန်သတိပေး